Kaominina Amboasary Avaratra : Nahazo famatsiana herinaratra -
AccueilRaharaham-pirenenaKaominina Amboasary Avaratra : Nahazo famatsiana herinaratra
20/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Famatsiana herinaratra ny tontolo ambanivohitra, mitohy ny fitokanana ataon’ny Filoham-pirenena. Tany amin’ny tanàna antsoina hoe Ambatokelivava, kaominina Amboasary Avaratra, any distrikan’Anjozorobe indray no nametrahana ny fotodrafitrasa vaovao famatsiana herinaratra nitokanan’ny Filoha Rajaonarimampianina Hery ny faran’ny herinandro teo. Tetikasa natao hitondrana fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, ka ny faritra Analamanga sy Amoron’i Mania no hiompanan’ny asa. Mitentina 1 406 000 000 Mga eo moa ity fotodrafitrasa ity, ary fiaraha-miasa teo amin’ny fanjakana malagasy sy ny vondrona Eropeana, ny Tany Meva, GEFSGPPNUD, ny ADER, ary ny AIDER. Fa teo ihany koa ny fiaraha-mientan’ny mponina, araka ny loharanom-baovao. Marihina fa, mahasehaka tanteraka ny filana ara-herinaratra ny kaominina Amboasary Avaratra ity fotodrafitrasa ity, araka ny fanazavan’ny Ben’ny tanàna any an-toerana. Mponina manodidina 14 725, amin’ny fokontany 10 ao amin’ny kaominina Amboasary Avaratra sy ny kaominina ambanivohitra Amparatanjona no hisitraka ny herinaratra, izay mamokatra hatramin’ny 100kw ireo milina saingy ny 60kw ihany aloha hatreto, dia efa ampy hamatsy ny filan’ny mponina. Fantatra moa fa mbola tsy nanana olana amin’ny resaka delestazy ireo mponina any Amboasary Avaratra hatramin’ny nahatongavan’ny jiro tany amin’izy ireo ny faramparan’ny taona 2016, fa kosa 440 Ariary ny vidin’ny kwh, raha toa ka 900 Ariary ny aty an-drenivohitra.
Raha tsiahivina, efa tany amin’ny taona 1980 no nisy fanamboarana toho-drano farany teto amintsika. Nandritra izay 4 taona nitondran’ny Filoha izay anefa, efa maro ireo ezaka natao teo amin’ny fanatsarana ny teknika famokarana herinaratra izay. Nomarihin’ny Filoha nandritra ny kabariny, fa “tombony lehibe ho an’ny mpanjifa ny fampiasana angovo azo havaozina.” Nohamafisin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery ihany koa ny amin’ny tokony hifanomezan-tanana amin’ny fampandrosoana ny firenena. “Aoka tsy ho lany andro amin’ny fifanenjehana sy ny tsikera tsy mampandroso, fa hifanome tanana amin’ny fampandrosoana ny firenena. Miantso anareo vahoaka ihany koa mba tsy hanaiky handairan’ny tsaho, indrindra amin’izao vanim-potoana izao.” Raha ny tanjona napetraka, mponina amin’ny faritra Analamanga sy Amoron’I Mania manodidina ny 77 000 no hisitraka ny herinaratra. Tafiditra amin’izany ny tokantrano 1 580, sekoly 38, ireo orinasa madinika sy salantsalany ary fotodrafitrasa ara-pahasalamana.
Ankoatra izay anefa, dia mbola olana goavana sedrain’ny kaominina Amboasary Avaratra ny faharatsian’ny lalana. Fantatra mantsy fa lalana 57km miala an’Anjozorobe , dia atao ora 5, na ora 6 amin’ny fiara 4×4 rehefa fahavaratra. Vokatr’izay, tsy mivoaka ny vokatra, ka zary lasa miraviravy tanana ireo tantsaha. Misy ihany koa ny lalana mivoaka mihazo ny faritra Alaotra, saingy sarotra noho ny faharatsian’ny lalana sy ny fahatapahan’ny tetezana. Nanome toky anefa ny Filoha, fa hijery manokana izany lalana izany, ary hatao laharam-pahamehana ihany koa ny ny fanamboarana ilay tetezana.
Nangonin’i Laurena Nany
Mitady hahazo vahana ny fitrandrahana solika an-dranomasina tsy ara-dalàna eny amin’ny fari-dranomasin’i Morondava sy Maintirano. Araka ny vaovao azo tamin’ny tale jeneralin’ny CFIM (Centre de fusion des informations Maritime), omaly, efa nanomboka ny volana mey ...Tohiny